Afaka mihazakazaka fampiharana Ubuntu Touch amin'ny Ubuntu Desktop | ianao izao Ubunlog
Mbola betsaka ny sisiny manodidina ny Ubuntu Touch sy ny fampitambarana azy saingy vitsy kokoa ary vitsy. Ny famahana farany dia ny toe-javatra misy ankehitriny an'ny Ubuntu Touch Core Apps, fonosana iray izay nahatonga ny fampiharana Ubuntu Touch hiasa amin'ny birao anay. Andro vitsivitsy lasa izay, David Planella dia nitatitra tamin'ny alàlan'ny lisitry ny mailaka ho an'ny mpamorona fa ny fanavaozana farany ny fonosana dia ahafahanao mametraka app amin'ny tsenan'ny Ubuntu Touch. Na inona no mitovy, ny isan'ny fampiharana Ubuntu dia mitombo be.
Ka manomboka izao amin'ny alàlan'ny fametrahana ny Ubuntu Core Apps dia ahafahantsika mametraka client Telegram, client Twitter, famantaranandro, kalandrie, lalao poker, sns… eo amin'ny birao. Saika hiasa tsara daholo izy ireo ary saika lazainay fa saika izy rehetra satria raha mila fitaovana manokana toy ny GPS ianao ary tsy manana izany ny ekipanay dia tsy handeha tsara ireo fampiharana.
Ahoana no ahazoako Ubuntu Touch Core Apps?
Tsotra ny fametrahana azy, saingy satria mbola tsy milamina dia tsy hita ao amin'ny trano fitahirizana ofisialy ny Ubuntu Touch Core Apps fa mila mametraka avy amin'ny tahiry hafa izahay.
Vantany vao tafapetraka ny trano fitahirizana dia manavao izahay:
Ary apetrakay ny fonosana:
Aorian'izany dia hanana fidirana amin'ny apps Ubuntu Touch izahay. Mazava ho azy, tsy izy rehetra no mbola ampakarina ao amin'ity tahiry ity, fa ny lehibe indrindra.
Izaho manokana dia hitako fa tena mahaliana tsy ho an'ny mpamorona ihany, izay namboarina ity fonosana ity, fa ho an'ny mpampiasa rehetra ary hampalaza an'i Ubuntu Touch. Ny ekipan'ny Ubuntu dia mety nikapoka ny ambiny tamin'ity satria sarotra be ny mametraka ny fampiharana Windows Phone, Android na iOS amin'ny rafi-birao misy azy ireo. Isaky ny manaitra bebe kokoa ny Ubuntu ka mety tsy ho tsara ho an'ny mpampiasa Ubuntu fotsiny ny fampitambatra fa mety hahagaga ny mpampiasa hafa koa, inona no lazainao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » General » About us » Afaka mihazakazaka fampiharana Ubuntu Touch amin'ny Ubuntu Desktop ianao izao
JMolina dia hoy izy:
Valiny amin'i JMolina
Torolalana dia hoy izy:
Efa nataoko izay lazain'izy ireo eto, ary ankehitriny ahoana no fahitako ireo rindranasa vaovao?
Mamaly an'i Guido
Popcorn Time sy ny beta vaovao 0.3.8